ထက်မြက်တဲ့မိန်းခလေးဆိုတာ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုခေါ်တာပါ…. – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > ထက်မြက်တဲ့မိန်းခလေးဆိုတာ ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုခေါ်တာပါ….
တစ်ခါတရံ ဘဝမှာ ကိုယ့်ဖက်က ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခင်မြတ်နိုးနေပါစေ၊တစ်ဖက်လူက စိတ်မပါတော့တဲ့အခါ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။တစ်ချို့ကတော့ ဒီလိုလူတွေကို ဆွဲထားဖို့အတွက် မာနတွေအားလုံးကို ခဝါချထားပြီး ဆွဲထားတတ်ကြတယ်
ပေးဆပ်တယ်၊ အနစ်နာခံတယ်၊ လုပ်သမျှကို အောင့်အီးသည်းခံနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ဘဝထဲ မနေချင်တော့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို နေပါလို့ ဆွဲထားမယ့်အစားကိုယ်ကအရင်ထွက်သွားမယ့် မာနခဲလေးတွေကတော့ ဒီလိုပါ။
(၁) သူ့ထပ်ကိုယ်က ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်
သူကကိုယ့်အတွက်အရမ်းအရေးပါတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူကကိုယ့်ဆီမှာ မနေချင်တော့တဲ့အခါ သူ့ထပ်ကိုယ်က အရေးကြီးသွားပါပြီ။အကြောင်းကတော့ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့် ဘဝထဲမှာ ကိုယ်ပဲရှိတော့တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ ခံယူထားသူတွေပါ။
ကိုယ့်ဘဝထဲမရှိချင်တော့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဆွဲထားခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးကျသွားစေတယ်လို့ ခံစားရတဲ့သူတွေပါ။ခဏသွေးပူတုန်း လုပ်လိုက်မိတဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ သိက္ခာတွေ၊မာနတွေအားလုံးကို စတေးလိုက်မယ့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လောက်ပဲ နာကျင်နေရင်တောင်မှ နည်းနည်းလေးမှ မာနကိုအထိခိုက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
(၃) ဆွဲထားရတာ ဝါသနာမပါဘူး
ဒီလိုလူတွေဟာ ဆွဲထားရတာ လုံးဝဝါသနာမပါတဲ့သူတွေပါ။ကိုယ့်ဘဝမှာမနေချင်တော့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို အောက်ကျနောက်ကျစကားလုံးတွေ၊မက်လုံးတွေပေးပြီး ဆွဲမထားချင်တဲ့သူပါ။ဆွဲမယ့်သူမဟုတ်ပဲ အဆွဲခံရမယ့်သူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေပါ။
(၄) သူထွက်သွားတာကို ကြည့်မနေနိုင်ဘူး
ဆွဲထားမယ့်အစားကိုယ်ကအရင်ထွက်သွားမယ့်သူတွေဆိုတာ သူထွက်သွားတာကို ပြုံးပြုံးလေးကြည့်နေမယ့်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ကျန်နေခဲ့တဲ့ အရှုံးသမားအဖြစ်နဲ့ ကျန်ခဲ့မှာထက်စာရင် အသည်းကွဲခံပြီး ခေါင်းမော့ကာဦးအောင်ထွက်သွားမယ့်သူတွေပါ။
(၅) အချစ်ထက်မာနက အရေးကြီးတယ်
ဆွဲထားမယ့်အစားကိုယ်ကအရင်ထွက်သွားမယ့်သူတွေဆိုတာ အချစ်ထက်မာနကို ပိုပြီးအလေးထားတဲ့သူတွေပါ။အချစ်ကမတည်မြဲပေမယ့် မာနကိုတော့ အဆုံးထိတိုင်ယူသွားမယ့် မာနခဲလေးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။
တစ္ခါတရံ ဘဝမွာ ကိုယ့္ဖက္က ဘယ်လောက္ပဲ ခ်စ္ခင်ျမတ္နိုးနေပါစေ၊တစ္ဖက္လူက စိတ္မပါတော့တဲ့အခါ ဘယ္လိုမွ လုပ္လို့မရေတာ့ပါဘူး။တစ္ခို့ကေတာ့ ဒီလိုလူတြေကို ဆြဲထားဖို့အတြက် မာနေတြအားလုံးကို ခဝါခ်ထားပြီး ဆြဲထားတတ်ကြတယ်
ပေးဆပ္တယ်၊ အနစ္နာခံတယ်၊ လုပ်သမျွကို အောင့်အီးသည်းခံနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့္လည်း ကိုယ့္ဘဝထဲ မေနခ်င်တော့တဲ့သူတစ်ယောက္ကို နေပါလို့ ဆြဲထားမယ့်အစားကိုယ္ကအရင္ထြြက်သားမယ့် မာနခဲလေးတြေကေတာ့ ဒီလိုပါ။
(၁) သူ့ထပ္ကိုယ္က ပိုပြီးအေရးကြီးတယ်
သူကကိုယ့်အတြက်အရမ်းအေရးပါတယ္ဆိုပေမယ့္လည်း သူကကိုယ့္ဆီမွာ မေနခ်င်တော့တဲ့အခါ သူ့ထပ္ကိုယ္က အေရးကြီးသြားပါပြီ။အေကြာင်းကေတာ့ ရွေ့ဆက်လျွောက်ရမယ့် ဘဝထဲမွာ ကိုယ္ပဲရွိတော့တာကြောင့် ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဂရုစိုက္ဖို့လိုတယ္လို့ ခံယူထားသူတြေပါ။
ကိုယ့္ဘဝထဲမရွိခ်င်တော့တဲ့သူတစ်ယောက္ကို ဆြဲထားျခင်းဟာ ကိုယ့္ကိုတန္ဖိုးက်သြားစေတယ္လို့ ခံစားရတဲ့သူတြေပါ။ခဏေသြးပူတုန်း လုပ္လိုက္မိတဲ့အရာတစ္ခုအတြက် ကိုယ့်ရဲ့ သိက္ခာတြေ၊မာနေတြအားလုံးကို စေတးလိုက္မယ့်သူတြေမဟုတ္ပါဘူး။ဘယ်လောက္ပဲ နာက်င်နေရင်တောင္မွ နည်းနည်းလေးမွ မာနကိုအထိခိုက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။
(၃) ဆြဲထားရတာ ဝါသနာမပါဘူး
ဒီလိုလူတြေဟာ ဆြဲထားရတာ လုံးဝဝါသနာမပါတဲ့သူတြေပါ။ကိုယ့္ဘဝမွာမေနခ်င်တော့တဲ့သူတစ်ယောက္ကို အောက္က်နောက္က်စကားလုံးတြေ၊မက္လုံးေတြေပးပြီး ဆြဲမထားခ်င္တဲ့သူပါ။ဆြဲမယ့်သူမဟုတ္ပဲ အဆြဲခံရမယ့်သူလို့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတ္မွတ္ထားတဲ့သူတြေပါ။
(၄) သူထြြက်သားတာကို ကြည့်မေနနိုင္ဘူး
ဆြဲထားမယ့်အစားကိုယ္ကအရင္ထြြက်သားမယ့်သူတြေဆိုတာ သူထြြက်သားတာကို ျပုံးျပုံးလေးကြည့်နေမယ့်သူတြေ မဟုတ္ပါဘူး။က်န်နေခဲ့တဲ့ အရှုံးသမားအျဖစ္နဲ့ က်န္ခဲ့မွာထက္စာရင် အသည်းကြဲခံပြီး ခေါင်းမော့ကာဦးအောင္ထြြက်သားမယ့်သူတြေပါ။
(၅) အခ်စ္ထက္မာနက အေရးကြီးတယ်
ဆြဲထားမယ့်အစားကိုယ္ကအရင္ထြြက်သားမယ့်သူတြေဆိုတာ အခ်စ္ထက္မာနကို ပိုပြီးအေလးထားတဲ့သူတြေပါ။အခ်စ္ကမတည်ျမဲပေမယ့် မာနကိုတော့ အဆုံးထိတိုင်ယူသြားမယ့် မာနခဲလေးတြျေဖစ်နေတာကြောင့္ပါ။
Previous Article မြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ် ” သိသာသိစေ ၊ မမြင်စေနဲ့” တဲ့
Next Article မေ ၂၀ ရက်မှ ၂၅ရက်နေ့အတွင်း ဆီအိုးကြီးအတွက် နှမ်းမိုး …